BC: Shirka Muqdisho waa fursad muhiim ah, yaan la lumin | KEYDMEDIA ONLINE
BC: Shirka Muqdisho waa fursad muhiim ah, yaan la lumin
Waxay ugu mahadceliyeen Madaxda maamullada ka qeybgalkooda aan shuruuda ku xirnayn.
MUQDISHO, Soomaaliya - Beesha Caalamka ayaa sheegtay in Shirka la filayo inuu ka furmo Muqdisho maalmaha soo socda uu yahay furad wayn oo ay tahay inay madaxda Soomaaliya ka lumin shacabka.
Qoraal ay si wadajir ah usoo saareen ayay ku sheegeen in Shirka indhaha lagu wada hayo, islamarkaana laga filayo inay kasoo baxaan go'aanno wanaagsan iyo heshiis loo dhan yahay oo lagu qaban karo doorashadda.
Waxaa lagu bogaadiyay Rooble qabashadda Shirka, sidoo kale hogaamiyeyaasha Maamullada waxaa looga mahadceliyay kasoo qeybgalkooda shuruud la'aanta.
Waxay Wakiiladda Beesha Caalamka ku baaqeen in dhinacyada ay sameeyaan tanaasul wax ku ool ah, si heshiis deg deg ah loo gaaro, kaasoo saldhig u ah heshiiskii Sep 17 ee la xiriira nidaamka doorashadda.
Maanta ayay ahayd waqtiga loo qabtay inuu shirka ku furmo, laakiin dib u dhac ku yimid, iyadoo ay maqan yihiin Guudlaawe iyo Deni oo la sugayo berri, waxaana kulanka billaabanayaan Sabtida.
Shirka furitaankiisa waxaa qeybgalaya Musharixiinta Mucaaradka, Bulshadda Rayidka iyo dhinacyada kale, waxaana lagu soo koobay qeybihiisa dambe dowladda iyo Maamullada, iyadoo ay jiraan baaqyo ku aadan in wadahadallada noqdaan kuwa loo dhan yahay.
0 Comments Topics: beesha caalamka rooble soomaaliya